केवल एक रूपैयाँले विकास – – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
केवल एक रूपैयाँले विकास –
२०७१ जेष्ठ २७, मंगलवार ०२:११ गते
कुरा एक रूपैयाँको हो, प्रत्येक दिन प्रत्येक गाउँ परिवर्तित हुन सक्छ । विकासको चाहना सबैलाई हुन्छ । प्रत्येक कुनाकुनामा विकास भएको सबैलाई हेर्न मन छ । विकासको राम्रो सम्भावना भएर पनि धेरै कारणबाट विकासले गति लिन सकिरहेको छैन, आखिर किन ? कसलाई सोध्ने ? सबै सरकारको ढुकुटी हामी जनताकै हो । तर विडम्बना, हामी स्वयं जनताले सरकारी भनिदिन्छौँ । अनि, सुरू गर्छौं लापरबाहीका कदमहरु ।
आज हरेक क्षेत्रमा अझ भनौँ विशेषगरी सरकारी क्षेत्रमा लापरबाही बढ्दो छ । चाहे त्यो कर्मचारीबाट होस्, चाहे सर्वसाधारण जनताबाट । देशले विकास खोजिरहेको छ, विकास नभएर तड्पिरहेको यथार्थ छ । हामी सबैसामु स्पष्टै छ, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएर पनि धेरै ठाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिरहेको छ । लोडसेङिङको त झन् कुरैै नगरौँ, यस्ता समस्या धेरै छन् । सधैँ समस्या मात्र बृहद् देखिन्छ, कुनै पहल सुरू नै हुँदैनन् । भइहाले पनि ढिलो गरेर हामी हरेक समस्यामा सरकारको आश गर्छौं । यो समाज, यो देश तपाई हाम्रो पनि हो । हुन त, सरकार पनि हाम्रो नै अभिभावक हो । तर, अभिभावकलाई मजबुत बनाउन परिवारको ठूलो हात रहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई स्मरण रहोस् ।
यस्तै–यस्तै समस्या देखिरहने र सुनिरहने भएर होला धेरै समयअगाडिबाट यो मस्तिष्कले एउटा कुरा सोचिरहेको थियो । धेरै पटक प्रस्फुटन गर्छु भन्ने ठान्थेँ, तर कुनै कोणबाट असम्भव हुने हो कि भन्ने लाग्थ्यो । त्यो सोचलाई आज यो लेखमा समावेश गर्ने प्रयत्न गर्दैछु । पक्कै पनि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेमा विश्वस्त छु ।
आजभोलि तपाईं हामी सबैले मोबाइलको प्रयोग गरिरहेका छौँ । हामीलाई त्यो तथ्याङ्क पनि थाहा छ । सरदर ग्राहक २ करोडभन्दा बढी रहेका छन् । हेर्नुहोस् त, ती ग्राहक अरु कोही नभएर तपाईं हामी नै हौँ । केही वर्षअगाडिदेखि अर्थात् एक–दुई दशकमा मोबाइल फोनले धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । यहाँनेर प्रसंग बंगाएर एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो । तपाईंले आफ्नो समाज÷देश बनाउनु प¥यो, विकासको बाटोेतिर लम्कनु प¥यो भनेर यदि कसैले चन्दा माग्न आउँछ भने मनसँगै धन हुनेले ठूलै रकम सहयोग गर्नुहोला । चाहेर पनि मध्यम वर्गले ५०, १०० र ५०० दिन्छु भन्छ होला । यदि केही पनि छैन भने २–४ रूपैयाँ त पक्कै सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईंले । सायद कोही पनि यस्तो थालनीको विरूद्धमा उत्रन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर हेर्नुहोस्, मैले उठाउन खोजेको कुरा कुनै यस्तो १०००, ५००, १००, ५०, २०, १०, ५ रूपैयाँको होइन । तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको अर्थात् २ करोडभन्दा बढी जनाले मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् आज । तपाई हामीले यी कम्पनी (नेपाल टेलिकम, एनसेल आदि) सँग केही मह¤वपूर्ण सेवा लिएका छौँ । केही मनोरञ्जनात्मक सेवा लिएबापत अर्थात् उदाहरणका लागि एउटा रिङ ब्याक टोन राखेबापत यी कम्पनीलर्ई सरदर दैनिक १ रूपैयाँ बुझाउँछौँ ।
तर, एक पटक सोच्नुहोस् त । यहाँनेर २ करोड बढी प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जनसँगै विकासका लागि १ रूपैयाँ दिन्छौँ भनिदियो भने त्यो १ रूपैयाँ २ करोडमा परिणत हुन्छ । तपाईंको मोबाइलबाट काटिन्छ १ रूपैयाँ दैनिक, तर जम्मा हुन्छ २ करोड दैनिक । हेर्नुहोस् त ! दैनिक २ करोड, मासिक ६० करोड, वार्षिक ७ अर्ब २० करोडले कुनै गाउँका लागि विकास गर्ने हो भने नसोचेको परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? सरकारी विकास त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । आफ्नो देशको विकासका लागि आफैँ लागौँ भन्ने नारा लिई हिँड्ने पनि हामी नै हौँ ।
आखिर कुरा ठूलो पनि त होइन, मात्र १ रूपैयाँले पूरै गाउँमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । याद गर्नुहोस्, तपाईंले कुनै साथीलाई बेकारको फोन गरेर २–४ रूपैयाँ सिध्याइरहनु हुन्छ । अनावश्यक रुपमा धेरै सेवा उपयोग गरिरहनुभएको हुन्छ । सोच्नुहोस् त, तपाईं हामी स्वयं लागिप¥यौँ भने परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? कुरा आउँछ कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने, यदि हामी स्वयंले आफ्नो विकासका लागि प्रत्येक दिन १ रूपैयाँ जम्मा गर्छौं भन्दा यी संस्थाले पक्कै सहयोग गर्छन् । कानुनी प्रावधान के छ, त्यो जानकार पक्षलाई नै थाहा होला । केही सकारात्मक काम गर्छौं भन्दा कानुनले पनि रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अर्कातिर, दैनिक उठेको अर्थात् २ करोडमाथिको सो रकममा हामी प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छौँ । त्यसले आप्mनो निगरानी पनि खुकुलो हुँदैन । पारदर्शी रुपमा यो रकमलाई जस्ताको त्यस्तै विकासका रुपमा परिणत गर्न सके परिवर्तन हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ । हेर्नुहोस् त, कुरा १ रूपैयाँकै हो । प्रत्येक दिन प्रत्येक गाउँलाई परिवर्तित गर्न सकिन्छ ।